Ụlọ Hyperbaric maka ire - Ịzụta Hyperbaric Oxygen Therapy Chamber na Ahịa Ahịa Dị Mma
Ụlọ Hyperbaric maka ire ere - Hyperbaric Oxygen Treatment HBOT
Home/Ụlọ Hyperbaric maka ire ere - Hyperbaric Oxygen Treatment HBOT
Ụlọ Hyperbaric maka ire ere - Hyperbaric Oxygen Treatment HBOTteknamfg2018-02-10T08:38:38+00:00
Ụlọ Hyperbaric maka ire ere
Zụrụ Ụlọ Hyperbaric zuru oke gị na Tekna
Ụlọ Hyperbaric Monoplace $
Ụlọ Hyperbaric dịgasị iche iche $
Ụlọ Hyperbaric Transportable $
Obodo Hyperbaric Mobile
Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Nkà Mmụta Ahụike $
Ọgwụ Nlekọta Ahụike (O2)
Tekna nwere nhọrọ kachasị mma nke Ụlọ nke Hyperbaric nke oge a na nke dị mma.
Tekna na-enye Monoplace, Multiplace, Mobile, na Transportable Hyperbaric Ụlọ dị iche iche configurations iji zute ihe ọ bụla e mere ma ọ bụ ụgwọ chọrọ.
Mgbe ịzụrụ Hyperbaric Oxygen Chamber nke Tekna ị ga - enweta ego kachasị mma na ọzụzụ na enweghị ego ọzọ.
International Distributors : Tekna nwere Distributors n'ụwa nile. Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa chọrọ ịnwa onye nkesa biko biko kọntaktị Tekna India na Onye nkesa peeji. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịghọ Onye nkesa maka mpaghara mpaghara gị n'èzí North America biko kpọtụrụ Tekna India.
Ụlọ Hyperbaric dị na Miiba maka ire ere
Ụlọ Hyperbaric dịgasị iche maka ire ere
Ụlọ Hyperbaric Transportable maka ire ere
Ebe obibi Hyperbaric dịgasị iche iche
Ụlọ Hyperbaric Mobile maka Ahịa
Ụlọ Ụlọ Hyperbaric dị iche iche